RIKOODHADII laga diiwaan geliyey guushii soo laabashada ahayd oo ay Man City ka gaartay Arsenal – Gool FM
(Manchester) 18 Dis 2016 – Kooxda kubadda cagta Man City ayaa ku degtay kaalinta labaad ee kala horreynta horyaalka Premier League, markii ay guul soo laabasho ah ka gaartay naadiga Arsenal oo ay ku soo dhowaysay garoonkeeda Etihad, waxaana City ay kulankan ku badisay 2-1.
Arsenal ayaa goolka la horreysay waxaana u dhaliyey Theo Walcott, laakiin labo gool oo ay kala dhaliyeen Leroy Sane iyo Raheem Sterling ayey Man City ku adkaatay.
>- David Silva ayaa loo diiwaan geliyey 60 gool caawin horyaalka Premier League, waana in ka badan ciyaaryahan kasta oo kale tan iyo markii uu ku soo biiray Man City.
>- Leroy Sane ayaa dhaliyey goolkiisii ugu horreeyey kooxda Manchester City.
>- Man City ayaa shabaqadeeda gool ka ilaashatay 2 kulan oo qura 19 kulan oo ay ciyaartay tartammada oo dhan.
>- Goolhayaha Arsenal ee Petr Cech ayaa siddeed kulan oo xiriir ah shabaqiisa gool ka ilaashan horyaalka Premier League, waana markii ugu horreysay xirfaddiisa ciyaareed.
>- Alexis Sanchez ayaa ku lug yeeshay kulankan 18 gool Premier League xilli ciyaareedkan, waxa uu dhaliyey 12 gool isagoo caawiyey 6 gool oo kale.
>- Arsenal ayaa wali ah kooxda kaliya ee iyadoo gool lagu hoggaaminayo qeybta hore ee ciyaarta aysan soo dhammaanin Premier League ama la kala nastay iyadoo gool lagu leeyahay, 17 jeer ayeyna sidaas yeeleen xilli ciyaareedkan, 8 kulan iyagoo ciyaarta hoggaanka u hayo ayaa la kala nastay, halka 9 kulan iyadoo ciyaarto barbaro tahay qeybta hore la kala nastay.
>- Alexis Sanchez ayaa kulankan loo diiwaan galiyey gool caawintiisii 18-aad ee horyaalka tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda Arsenal, waana in ka badan weeraryahannada kale ee Premier League.
>- Theo Walcott ayaa hadda noqday ciyaaryahanka shanaad ee goolasha ugu badan kooxda Arsenal u dhaliyey horyaalka Premier League, waxaana uu caawa dhaliyey goolkiisii 63-aad, isagoo ka sare maray Robert Pires.
>- Man City ayaa guul gaartay kulan Premier League oo la kala nastay qeybta hore iyadoo laga gacan sarreeyey markii ugu horreysay tan iyo bishii November sanadkii 2012, kulan ay ka hor jeedeen Spurs.
>- Arsenal ayaa laga badiyey saddex kulan oo horyaalka ah iyadoo ciyaarta hoggaanka u qabatay, waana in ka badan intii ay sameeyeen xilli ciyaareedkii hore ee 2015-16 oo laga badiyey labo kulan oo ay hoggaanka ciyaarta hayeen.
Lionel Messi oo RIKOODH kale dhigay